सपनामा सर्प देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ संकेत – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/सपनामा सर्प देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ संकेत
सपनामा सर्प देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ संकेत
काठमाडौँ । जनावरहरु सपनामा देखिनुले धेरै संकेत गर्दछ । त्यस्तै सर्प सपनामा देखिनु पनि विभिन्न जीवनका घटनाहरुसँग सम्बन्धित हुने उल्लेख छ।सर्प यौन को संकेत हो। सर्पको सपनाले यौनशक्तिलाई संकेत गर्दछ। यदि सर्प सपनामा आफुसँग बेरिन्छ वा कुनै शक्ति संचार गर्ने गरि काम गर्दछ भने त्यो सपनाले तपाईको यौन शक्ति बढेको संकेत गर्दछ।
केही सभ्यतामा सर्पलाई ज्ञान र शक्तिको प्रतिक मानिन्छ। सर्प सपनामा देखिनुको अर्थ हुन्छ, व्यक्तित्वमा आउने परिवर्तन। यस्ता सपनाले तपाईलाई अत्याउने गर्दछ, तर साथसाथ जुन कुराबाट एकदमै दुखित हुनुहुन्छ ती बिर्साउने अवसर पनि प्रदान गर्छ साथै तपाईलाई सावधान बनाउछ, र एकदमै नलौ जीवनको बाटोबाट अगाडी बढाउन सहयोग गर्दछ।
सर्पले सावधान गराउछ, यदि तपाईलाई कसैले छल गर्न लागेको छ भने।
कुनै लुकेका कुरा वा गोप्यकुराहरु प्रति तपाईलाई संकेत गर्ने हेतुले पनि सर्पको सपना देखिने हुन्छ। वा कुनै कुराको सत्यता तपाईलाई थाहा छैन भने पनि त्यसबारेमा संकेत गर्न खोजिएको पनि हुन सक्छ।
तपाईसंग लुकेका क्षमताको संकेतार्थ पनि हुनसक्छ सर्पको सपना। हामीले कुनै कुराको परिवर्तन प्रति मानिने डरको को बारेमा हुन्छ यस्तो सपना। जमिन मुनिबाट सुतेर (हाइबर्नेसन) उठेको सर्प आउदै गरेको सपना देखेमा तपाईमा भएको शक्ति तथा कार्यक्षमता तपाईको जोश र प्रेरणासगं मिलाउन चाहिने उर्जा प्राप्तिको लागि हुनसक्छ।
आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि
केही पूर्वीय संस्कृति अनुसार सर्पको सपनालाई जागेको कुण्डलीनीसंग पनि बुझिन्छ, मेरुदण्डको आधार बाट निस्कने यो शक्तिले तपाइको आध्यात्मिक शक्तिलाई जनाउछ। सपनाको सर्पले तपाईलाई बिग्रान हैन बरु तपाईको सुधारको लागि देखापर्ने हुन्छ।
सपनामा सर्प देखिनुले तपाईको वास्तविक जीवनमा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भइरहेको कुरालाई पनि इंकित गर्दछ। जीवनको भद्रगोलता लाइ पनि बुझाउँछ यस्तो सपनाले।
सपनामा देखिरहिने सर्पहरुको अर्थ राम्रो तथा नराम्रो दुवै हुन्छ। सर्पलाई गरिने व्यवहार र सर्पको बारेमा चलिआएको भनाइहरुपनि संस्कृति अनुसार फरक फरक नै हुन्छ। त्यसैले यसको सपनाको प्रभाव तथा अर्थपनि फरक फरक नै हुन्छ।
डरको प्रतिकको पनि मानिन्छ सर्पलाई, साथै लुकेका खतरा, वा कुनै व्यक्ति कतिको राम्रो नराम्रो भन्ने बारेमा पनि छुट्याउन सहयोग गर्छ सर्पको सपनाले।
कपालमा तेल लगाउँदा बिर्सिएर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र फाइदाको साट्टो पुर्याउनेछ नोक्सान
महिलाको यस्तो इच्छा जुन हरेक पुरुषलाइ थाहा नहुन सक्छ,खुलेर व्यक्त हुँदै
कलेज पढ्ने १७ बर्षीय युवतीको भाडाको कोठामा यस्तो काम, र´हस्य खुलेपछि छिमेकीनै अचम्मित
“सात दिन-भित्रमा तपाइले सोचेको काम ब’न्नेछ,बे-वास्ता नगर्नुहोला,पूरा पढेर ॐ लेखि से’यर गरौं”!